Robert Pattinson အပြင် Batman Suit ကို ဝတ်ခွင့်ရလောက်မှာ ဘယ်သူများလဲ
31 May 2019 . 4:28 PM
၂ဝ၂၁ ခုနှစ်မှာထွက်မယ့် The Batman ရုပ်ရှင်ကို Twilight မင်းသား Robert Pattinson နဲ့ ရိုက်မယ်လို့ ဟိုတလောက သတင်းတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသတင်းကြားကတည်းက Batman ပရိသတ်တော်တော်များများကတော့ ကြိုက်တဲ့ပုံသိပ်မပေါ်ခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ့်အတွက်လည်း Christian Bale ကလွဲရင် တခြား Batman မင်းသားတွေကို Batman လို့မြင်လို့မရခဲ့ဘူး (Ben Affleck ကိုလည်း မကြိုက်ခဲ့ဘူး)။ ဒါပေမယ့် နောက်ထပ်ရရှိထားတဲ့သတင်းအရတော့ Gotham ရဲ့ Cape Crusader နေရာကို လုယူမယ့်သူနောက်တစ်ယောက်ရှိနေပါပြီတဲ့နော်။
The Wrap ရဲ့ သတင်းထောက်ဖြစ်တဲ့ Umberto Gonzalez က မနေ့က Twitter မှာ ဘာတင်ထားလဲဆိုတော့ Robert Pattinson နဲ့ Nicholas Hoult တို့က Batman ဇာတ်ကောင်နေရာအတွက် Screen Test တွေလုပ်နေပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ ၂ဝ၂ဝ မှာ ဇာတ်လမ်းရိုက်ကူးရေးတွေစမယ်ဆိုတော့ အဓိကသရုပ်ဆောင်ကိုရွေးဖို့အတွက် ၂ဝ၁၉ တစ်နှစ်လုံးအချိန်ရနေပါသေးတယ်။ Matt Reeves က DCEU ကို Dark Knight အသစ်တစ်ယောက် ခေါ်ဆောင်လာပေးမယ်ဆိုပေမယ့် ဒီမင်းသားနှစ်ယောက်ထဲက ဘယ်သူဖြစ်နိုင်မလဲ။ နှစ်ယောက်စလုံးက မတူညီတဲ့ ဇာတ်ကားအမျိုးမျိုးမှာ သရုပ်ဆောင်ဖူးတဲ့သူတွေပါ။ Pattinson ဆိုရင်လည်း Good Time ၊ The Lost City of Z နဲ့ Twilight ဇာတ်ကားတွဲတွေကြောင့် လူသိများပြီး Hoult ကလည်း X-Men Franchise တွေမှာ Beast နေရာကနေ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး Dark Phoenix မှာလည်း ပြန်ပါလာဦးမှာပါ။ နောက်ပြီး Hoult က Tolkien ၊ The Favourite နဲ့ Mad Max: Fury Road တို့ကြောင့်လည်း နာမည်ကြီးပါသေးတယ်။
အရင်ကတော့ ဒီသရုပ်ဆောင်နှစ်ယောက် Superhero အခန်းတွေမှာ သရုပ်ဆောင်ခွင့်မရခဲ့တာက Costume နဲ့ မလိုက်လို့လို့ပြောကြပါတယ်။ ဒီတော့ အခုဇာတ်ကောင်ကို အတည်ပြုတဲ့အခါမှာ Batsuit နဲ့ ဘယ်သူကပိုလိုက်မလဲဆိုတာပါ ထည့်ပြီးစဉ်းစားမယ့်ပုံပါပဲ။ နောက်ပြီး ကိုယ်တွေမသိနိုင်သေးတဲ့ Batman ဇာတ်ကောင်နေရာကို လျာထားနိုင်တဲ့ တခြားသရုပ်ဆောင်တွေလည်း ရှိနေရင်ရှိနေဦးမှာပဲလေ။ ဒါ့အပြင် The Batman မှာဘယ် Villain တွေပါမလဲဆိုတာကိုလည်း ထပ်ပြီးတော့ ဖော်ပြပေးသွားဦးမယ်နော်။
ဒီတော့ ပရိသတ်ကြီးတို့ဘယ်လိုထင်လဲ။ Robert လား Nicholas လား။ သူတို့နှစ်ယောက်မှာ ဘယ်သူက Batman ရဲ့ အနှစ်သာရကိုဖော်ဆောင်နိုင်မလဲ။
Ref: The Daily Mail, IGN, Comicbookmovie
by Moethae Say . 10 hours ago